Umaki: i-animated gif | Martech Zone
Maka: i-animated gif
NgoMgqibelo, Januwari 23, 2021 NgoMgqibelo, Januwari 23, 2021 Douglas Karr
Ividiyo egqwayiziwayo futhi ebukhoma iyadingeka kuyo yonke inhlangano. Amavidiyo abandakanya kakhulu, anekhono lokuchaza imiqondo enzima ngamafuphi futhi anikeze umuzwa obonakalayo futhi ozwakalayo. Ngenkathi ividiyo ingumthombo omangalisayo, imvamisa ayinakunqotshwa kumabhizinisi amancane noma kubakhangisi ngenxa yezinsizakusebenza ezidingekayo: Okokusebenza kwamavidiyo nezomsindo okurekhodwa. Ama-overs wezwi anobuchwepheshe emibhalo yakho. Ihluzo zobungcweti nemifanekiso yokufaka. Futhi, mhlawumbe, ebiza kakhulu futhi
Eziningi zezinkombandlela zokuzijwayeza ezihamba phambili ze-imeyili engizifundile, ochwepheshe bavame ukudikibala abathengisi be-imeyili ekuthuthukiseni ama-imeyili anomfanekiso owodwa. Angikaze ngibe ngumthandi wemithetho efana nale, ngihlala ngicabanga ukuthi ukuzama amasu ahlukile kufanele ukuhlolwa. Namuhla, ngithole le imeyili emnandi evela kuNetflix. Kwakunomugqa wesihloko: Umsebenzi osolisayo █████ Marvel on Netflix █████ Uma uvula i-imeyili, umyalezo owodwa ovela nje
Kubukeka kucace bha uma ubuza lo mbuzo, Yini iCall To Action noma i-CTA, kepha imvamisa kuyithuba elilahlekile noma ithuba elihlukumezekile lokushayela abafundi, abalaleli, nabalandeli ngokujulile ekuzibandakanyeni nomkhiqizo wakho. Kuyini Ukubizelwa Esenzweni? Ukubizelwa esenzweni kufana nesifunda sesikrini esishayela umfundi ukuthi achofoze ukuze ahlanganyele ngomsindo ngomkhiqizo. Kwesinye isikhathi kuyisithombe, kwesinye isikhathi kuyinkinobho nje,
Angiqiniseki ukuthi kukhona okunye okukhungathekisayo kunokuhlela i-imeyili nokuqinisekisa ukuthi iyasebenza noma konke okuhlukile kuphathwa kuwo wonke amaklayenti e-imeyili. Imboni idinga ngempela ukuba nezinga lokusebenza kwe-imeyili njengoba nje ikwenzile ngeziphequluli. Uma uvula noma iyiphi i-imeyili edizayinwe kahle, ephendulayo ebukeka kahle kuzo zonke iziphequluli uzothola ukulandelana kwama-hacks we-hodgepodge ukuze kusebenze futhi kubukeke kahle ngangokunokwenzeka. Futhi noma kunjalo uzoba